Sanadka 2020, Dagestan wuxuu intaa dheer u qoondeyn doonaa 300 milyan oo rubil dib u soo celinta dhulka - Nidaamka Baradhada
Tallaabadan, sida laga soo xigtay Madaxa Jamhuuriyadda Dagestan, Vladimir Vasiliev, wuxuu yareyn doonaa dhibaatooyinka waraabinta ee ay sababtay roobka oo yaraaday.
Koonfurta koonfurta jamhuuriyada, xaddiga roobabku waxay ku yaraanayaan cimilada diirimaadka, tanina waxay horseedaa xaalad ka sii daraysa iyadoo ay jirto biyo-waraabin. Sidaa darteed, sanadkii la soo dhaafay waxaan u qoondeynay, sidii aan waligeed horay u dhicin, 500 milyan oo rubles oo dib loogula wareegi karo dhulka, laakiin tan kuma filna, maadaama ay dhibaatooyin soo urursanayeen aaggan tobannaan sano. Sannadkan waxaan qorsheyneynay 300 milyan oo dheeraad ah oo dheeri ah, ”ayuu yiri Vladimir Vasiliev kulan uu la yeeshay suxufiyiinta.
Waa in la ogaadaa in lacagaha la tilmaamay ay yihiin kuwo la qorsheeyay in badanaa lagu jiheeyo casriyeynta shabakadaha dib u soo celinta beeraha. Gaar ahaan, beeralleydu waxay diyaarin doonaan oo difaaci doonaan mashruucyada dib-ugu-soo-noqoshada dhulkooda, kuwaas oo, haddii la oggolaado, laga maalgelin doono miisaaniyadda gobolka.
Xusuusnow in sannadka 2019 ee Dagestan, shabakadda dib-u-diiwaangelinta dhul dhan 17 kun oo hektar ayaa dib loo soo celiyay oo dib loo dhisay iyadoo lagu saleynayo tikniyoolajiyad casri ah, taasoo suurtagelisay in la helo wax soo saar beereed oo dheeraad ah oo qiimahoodu ka badan yahay 1 bilyan rubles.
Tags: Dagestanwaraabka dhulkakororka wax soo saarka beeraha
Soosaarayaasha qudaarta waxay cadeeyaan siyaasada sicirka tafaariiqda aan sharciga aheyn
Ilaalinta iyo kicinta abuur baradho inta lagu gudajiray dhir
Ololaha goynta ayaa weli ka socda beeraha Dagestan
Gobolka Bryansk waxaa ku yaal dhir baradho ah
Munaasabadda warshadaha caalamiga ah "Dabaqa baradhada 2020" ayaa la qaban doonaa!